VACC20000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၂၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 20000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC20000
VACC20000 20000LPH Purified water filtration system is produced according to the most advanced technology with genuine and high-quality equipment andahigh capacity of water filtration.
VACC20000 20000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာကို စစ်မှန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရေစစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း မြင့်မားတဲ့ ခေတ်မီသော နည်းပညာနဲ့အတူ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
This is one of the best water filtration machines in Vietnam currently.
It is distributed and exclusively distributed by Viet An General Trading Joint Stock Company. It has been recognized as an exclusive brand No. 250970 250970 and under the brand name of VA, USApec by the National Office Of Intellectual Property Of Vietnam.
ဒီစက်က ဗီယက်နမ်မှာ အကောင်းဆုံး ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစက်ကို Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့် နံပါတ် ၂၅၀၉၇၀ ဖြစ်ပြီး ဗီယက်နမ်မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှ ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် VA အမည်အောက်မှာ အသိအမှတ်ပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ
The VACC20000 20000LPH Purified water filtration systems have genuine components imported from England, America, Japan, Netherlands, Italy are assembled at Viet An's largest factory in Hanoi. The system consists of below components:
VACC20000 20000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်ကို အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ နယ်သာလန်၊ အီတလီတို့မှ တင်သွင်းသောာ စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒီစနစ်မှာ အောက်က အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Push pump system: generates high pressure to pump water into the raw filter tanks.
တွန်းအားရေစုပ်စက်စနစ်- ရေကို ရေစိမ်းစစ်ထုတ်တိုင်ကီများထဲသို့ ဖိအားပြင်းဖြင့် ရေစုပ်တင်ပေးသည်
Air disinfection system: removes the bacterias in the air to createasterile environment.
လေပိုးသတ်စနစ်- ပိုးသတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန် လေထဲမှ ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားပေးသည်
Pre-filter system:: removes the sediment, mud, algae, impurities from the source water.
အကြိုစစ်ထုတ်စနစ်- ရေအရင်းအမြစ်ထဲမှ အနည်၊ ရွှံ့၊ ရေညှိ၊ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးသည်
Heavy metal filtration system: removes metals, alum, and impurities from the water.
ကြီးမားသော သတ္တုများ စစ်ထုတ်ကိရိယာ- ရေမှ သတ္တုများ၊ ကျောက်ချဉ်၊ အညစ်အကြေးများ ဖယ်ရှားပေးသည်
Detoxification, decontamination, and deodorizing system: uses activated carbon to remove toxins and odors from the water.
အဆိပ်အတောက်၊ ပိုးမွှား၊ အနံ့အသက် စစ်ထုတ်စနစ်- ရေမှ အဆိပ်အတောက် အနံ့အသက် ဖယ်ရှားရန် ကာဗွန်ကို အသုံးပြုသည်
Water softener system: Removes the precipitated limestone from the water, making it soft and protecting TO membrane in the next steps.
ရေကို ပျော့စေသော စနစ်- ရေမှ ထုံးကျောက်ကို ဖယ်ရှားပြီး ၄င်းကို ပျော့စေကာ နောက်တစ်ဆင့်မှ RO အလွှာပါးကို ကာကွယ်ပေးသည်
RO system: increases the pressure for the system, helps the system operate automatically, removes all bacteria and impurities remaining in the water, creatingacompletely pure water source.
RO စနစ်- စနစ်ရဲ့ ဖိအားကို တိုးစေတယ်။ စနစ်ကို အော်တိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကူညီပေးတယ်။ ရေထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်။ အပြည့်အဝ သန့်ရှင်းသော ရေအရင်းအမြစ်ကို ဖန်တီးပေးတယ်။
Bactericidal system and bacteria filter system: removes all the bacteria during the water flow from the RO filter system to the tank.
ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်စနစ်- ရေက RO စနစ်မှ တိုင်ကီထဲသို့ စီးဆင်းနေချိန်တွင် ဘက်တီးရီးယားအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးသည်
Fame and other accessories: support the machine and protect the system from external impacts.
ဖရိန်နှင့် အခြားအဆင်တဆာများ- စက်ကို အထောက်အကူပြုပြီး စနစ်ကို ကာကွယ်ပေးတယ်
Important information about VACC20000 20000LPH Purified water filtration system
VACC20000 20000LPH ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာစနစ်အကြောင်း အရေးကြီးသော အချက်အလက်
VA means Viet An
CC means Mechanical Composite valve
20000 means 20,000l of pure water per hour to be processed with the bottled water filtration system.
VA ဆိုတာက Viet An ကို ဆိုလိုတာပါ။
CC ဆိုတာက Mechanical Composite valve 20000 ကို ဆိုလိုပြီး အဓိပ္ပါယ်က ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ တစ်နာရီတွင် ၂၀၀၀၀ လီတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
VACC20000 is the water filtration system applying RO technology to remove all impurities, viruses, and other sources of infection from the water. Thus, the filtered water is safe for our health, ensuring food hygiene and safety standards set by the Ministry of Health.
VACC20000 က ရေမှ အညစ်အကြေးတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ အခြားကူးစက်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ RO နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ရေစစ်ထုတ်စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ရေက ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်ပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
With this machine, you will enjoy pure and sweet water without fears of impurities remained in the water.
ဒီစက်နဲ့ဆိုရင် ရေထဲမှာ အညစ်အကြေးတွေ ကျန်နေမှာကို စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး
With this product, you will haveapure water source that is safe for health and can be used in daily life. It will help to save time to buildamanual filter tank or boil the water while still ensuring the water quality and improving the health.
ဒီပစ္စည်းနဲ့ဆိုရင် ကျန်းမားရေးအတွက် သင့်တော်ပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ရေသန့်ကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီစက်က် အချိန်ကုန်လည်း သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
With its hourly capacity of 20,000L/hour, the machine can be used in the:
pharmaceutical and cosmetic manufacturing industry which strictly requires purity;
တစ်နာရီမှာ ၂၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ရေသန့်တွေ အများကြီးလိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ၊ အလှကုန် ကုမ္ပဏီတွေအတွက်လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
Schools, hospitals withalarge number of people and strict requirements on food hygiene and safety;
ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်တော်မှုရှိမရှိ စည်းကမ်းတင်းကြပ်ထားတဲ့ ကျောင်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေ
Resorts withalarge number of visitors and great demands of drinking;
Factories withalarge number of employee;
အလုပ်သမားတွေ အများအပြားရှိတဲ့ စက်ရုံတွေ
Urban areas, residential areas, and high-rise buildings with high population density;
လူဦးရေများတဲ့ မြို့ပေါ်ဒေသ၊ ကျေးလက်ဒေသနဲ့ အဆောက်အအုံမြင့်တွေ
Purified bottled water manufactures.
The first factor that Viet An always asks the customers to do is to define the water intake before the installation process. This will help to savearemarkable amount of manufacturing. Typically, well water is quite relevant to this system thanks to its stability, convenience, and low treatment cost.
Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို မတပ်ဆင်ခင် ရေအရင်းအမြစ်ကို သတ်မှတ်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ဒါက ထုတ်လုပ်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်က တည်ငြိမ်ပြီး အကုန်အကျနည်းတဲ့အတွက် တွင်းရေနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
We will guide the customers to have an overall test for the water intake to have the most exact instructions on component maintenance and replacement.
ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို အစိတ်အပိုင်းတွေ တည်တံ့မှုနဲ့ အစားထိုးမှုအတွက် တိကျအောင် ရေအရင်းအမြစ် စမ်းသပ်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Besides, we will also instruct you on how to design the installation model relevant to the sites and water sources.
ဒါ့အပြင် နေရာနဲ့ ရေအရင်းအမြစ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ တပ်ဆင်တဲ့ ဒီဇိုင်းကိုလည်း လမ်းညွှန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
We just hand over the system after finishing the installation and sending the operation manual to the customers.
တပ်ဆင်မှုပြီးတဲ့အခါ ဝယ်ယူသူတွေကို လုပ်ဆောင်မှု လမ်းညွှန်စာအုပ် လက်ကမ်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
After the trial operation of the purified water filtration line, we will bring the water sample to the laboratory for quality testing and completing the document and hand over it to the customers.
ရေစစ်ထုတ်တဲ့လိုင်းကို အစမ်းသုံးပြီး ရေနာမူနာကို ဓာတ်ခွဲခန်းထဲတွင် စစ်ဆေးပြီး ရေရဲ့အရည်အသွေးကို စာတမ်းထဲတွင် ထည့်ကာ ဝယ်ယူသူဆီကို ပေးလိုက်မှာ ဖြစ်တယ်။
We are proud to be the best company in importing and distributing the industrial purified water manufacturing and filtration systems in the market currently. Please visit https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc to check out our best products with the most competitive prices.
ကျွန်တော်တို့က ရေစစ်ထုတ်တဲ့ စနစ်တွေကို တင်သွင်းဖြန့်ချီတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီဖြစ်ရတာကို အလွန်ပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းတွေကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့ https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
During the operation, if you have any problems or inquiries, please call us at 19006013.
လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပြသနာပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်လည်း ၁၉၀၀၆၀၁၃ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
1 Push pump with 304 Stainless steelhead စတိန်းလက်စ်စတီးခေါင်းပါသော တွန်းအားရေစုပ်စက် 1 pc Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ် 20 pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရံ 20 pc VA/ USApec
16 A multi-Stage Booster pump system အဆင့်များစွာပါသော အားပြင်းရေစုပ်စနစ် 1 pc Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ်6pc VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါး 12 pc Hitech-USA/CSM Korea
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက်6pc VA/ USApec
275core filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်4pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 20 pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 20000 20000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်